Big City Small World (Series 1 Episode 1 - Meeting Friends) - Myanmar Network
Big City Small World (Series 1 Episode 1 - Meeting Friends)
Posted by Myanmar Network on February 15, 2012 at 14:17 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Big City Small World သည် British Council မှ စီစဉ်တင်ဆက်သည့် အခန်းဆက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ခန်းစာ အသံလွှင့်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်။ လန်ဒန်ရှိ တိုနီ၏ကော်ဖီဆိုင်တွင် လာနေကြဖောက်သည်များ၏ ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုဖော်ကျူးရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာသင်ကြားပေးသည့် အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားစတင်လေ့လာနေသော Myanmar Network အသင်းဝင်များ အဆင်ပြေလွယ်ကူစေရန် ဤနေရာတွင် စကားပြောများကို မြန်မာဘာသာပြန်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မူရင်းသင်ခန်းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင် နှင့် ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world တွင်သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
နောက်ဆက်တွဲသင်ခန်းစာများကိုလည်း Myanmar Network တွင်ပုံမှန်ဆက်လက်တင်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
Series 1 Episode 1 - Meeting Friends (အတွဲ (၁)၊ အပိုင်း (၁) - သူငယ်ချင်းများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း)
In this first episode our friends meet up inacafé.
ဤပထမအပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ သူငယ်ချင်းများသည် ကော်ဖီဆိုင်တွင် တွေ့ဆုံကြသည်။
Series 1 Episode 1 - Meeting Friends ( < အသံဖိုင် download ရယူရန် ဝဲဖက်မှ link ကိုနှိပ်ပါ)
Johnny: Hello! Hello? Excuse me! Excuse me?
Olivia: Just sit down anywhere – they don’t have waiters in here!
(ဘယ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်လို့ရပါတယ် - ဒီမှာ စားပွဲထိုးတွေ မရှိဘူး)
Johnny: Oh, ok, is it ok if I sit here?
(အို၊ ကောင်းပြီလေ။ ကျွန်တော်ဒီမှာ ထိုင်လို့ရမလားမသိဘူး)
Olivia: Sure...but you’ll need to go to the counter if you want anything...
(ရတာပေါ့... ဒါပေမယ့် မင်းတစ်ခုခုလိုရင်တော့ ကောင်တာကို သွားရလိမ့်မယ်။)
Johnny: Actually, I’m not really here to eat, or anything. I’m supposed to be meeting someone.
(တကယ်တော့ ကျွန်တော်က ဒီမှာ စားဖို့ရယ် ဘာရယ်ဆိုပြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်က လူတစ်ယောက်နဲ့ တွေ့ဖို့ရှိလို့ပါ။)
Olivia: Well, wait here long enough, most of London will come in...
(ကောင်းပါပြီ။ ဒီမှာ အချိန်တော်တော်ကြာစောင့်လိုက်ရင် လန်ဒန်တစ်မြို့လုံးကလူတွေ ၀င်လာပါလိမ့်မယ်)
Olivia: Just joking.
Sarah: Excuse me, is anybody sitting here?
(စိတ်မရှိပါနဲ့၊ ဒီမှာ တစ်ယောက်ယောက်ထိုင်နေလားမသိဘူး)
Olivia: I can’t see anyone!
Olivia: Just joking. Go ahead, sit down.
(စတာပါ။ လုပ်ပါ။ ထိုင်ပါ။)
Olivia: You might be waitingawhile if you sit here.
(ဒီမှာထိုင်နေရင်တော့ အချိန်တော်တော်ကြာ စောင့်နေရမှာပဲ)
Olivia: There are no waiters here – people usually just go up to the counter and order whatever they want.
(ဒီမှာ စားပွဲထိုးတွေမရှိဘူး - များသောအားဖြင့် ကောင်တာကိုသွားပြီး လိုချင်တာတွေမှာကြတယ်လေ)
Sarah: Oh...well...I’m just supposed to be meeting someone here actually...
(အို..ကောင်းပါပြီ.. ကျွန်မက ဒီမှာ လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ဖို့ ချိန်းထားလို့ပါ...)
Olivia: Not him, by any chance?
Olivia: This guy here!
Sarah: Oh. No...
Johnny: No...I am waiting to meet someone...but not you! Where are you from, anyway?
(မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော် လူတစ်ယောက်ကို တွေ့ဖို့စောင့်နေတာပါ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ ဘယ်ကနေလာတာလဲ)
Sarah: Well, I live in London now, but I’m originally from Shanghai.
(ကျွန်မက အခုတော့ လန်ဒန်မှာနေတယ် ဒါပေမယ့် ကျွန်မက ရှန်ဟိုင်းဇာတိ)
Johnny: Thought so! I’m from Hong Kong.
(ထင်တော့ ထင်သားပဲ။ ကျွန်တော်က ဟောင်ကောင်က)
Olivia: Sorry to interrupt..but who are you both waiting for?
(နှောင့်ယှက်ရတာ အားနာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့ ၂ ယောက်လုံးက ဘယ်သူ့ကိုစောင့်နေတာလဲ)
Johnny: I’m waiting for my friend Harry...
(ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း Harry ကို စောင့်နေတာပါ)
Sarah: ...and I’m waiting for my friend Magda...
(ကျွန်မကတော့ ကျွန်မသူငယ်ချင်း Magda ကိုစောင့်နေတာပါ…)
Olivia: How interesting!
Johnny: Erm...why’s that interesting?
(အင်... ဘယ်လိုများ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာလဲ?)
Olivia: Because Harry and Magda are both friends of mine as well, and right now I’m waiting for both of them too...and here they are!
(ဘာလို့လဲဆိုတော့ Harry ရော Magda နှစ်ယောက်လုံးက ငါနဲ့လည်း သူငယ်ချင်းတွေပဲ၊ ပြီးတော့ ငါလည်းအခု သူတို့ ၂ ယောက်လုံးကို စောင့်နေတာ...နောက်ပြီးတော့...သူတို့ဒီမှာ)
Olivia: Let’s make this easier - I’m Olivia!
(ပိုပြီးလွယ်အောင်လုပ်ရအောင် - ကျွန်မက Olivia ပါ)
Johnny: I’m Johnny. I’mafriend of...
(ကျွန်တော်က Johnny ပါ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကတော့…)
Harry: ...mine. He’safriend of mine. I’m Harry.
(ကျွန်တော်ပါ။ သူက ကျွန်တော့သူငယ်ချင်းပါ။ ကျွန်တော်က Harry ပါ)
Sarah: Ok! I’m Sarah, and I’mafriend of...
(အိုကေ! ကျွန်မက Sarah ပါ။ ကျွန်မရဲ့ သူငယ်ချင်းကတော့...)
Magda: ...mine! I’m Magda. Nice to meet you!
(ကျွန်မပါ! ကျွန်မက Magda ပါ။ တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။)
Olivia: This is complicated, isn’t it? Shall I get some tea? I think we’ll needabig pot, this might take some time. So, how do we all know each other..?
(ဒါက ရှုတ်ထွေးနေတာပါ မဟုတ်ဘူးလား။ လက်ဖက်ရည်မှာလိုက်ရမလား။ ငါတို့တွေ အိုးကြီးလိုမယ်နဲ့ တူတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အချိန်နည်းနည်းကြာလိမ့်မယ်။ ကဲ။ ငါတို့အကုန်လုံး အချင်းချင်းဘယ်လိုသိကြတာလဲ …… )
မူရင်းသင်ခန်းစာ စာသား၊ mp3 အသံဖိုင် နှင့် ဆက်စပ်လေ့လာနိုင်သော လေ့ကျင့်ခန်းများကို http://learnenglish.britishcouncil.org/en/big-city-small-world/seri... တွင်သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
Big City Small World (Series 1 Episode2- Job Offer)
Big City Small World (Series 1 Episode3- Kicked Out!)
Big City Small World (Series 1 Episode4- We HaveaMission)
Big City Small World (Series 1 Episode5- Fadi to the Rescue)
Big City Small World (Series 1 Episode6- He'saPest!)
Big City Small World (Series 1 Episode7- Cheer Up!)
Big City Small World (Series 1 Episode 8 - I'll Be Rich In Three Ye...
Big City Small World (Series 1 Episode9- Aaagghhh...My Injured Leg!)
Big City Small World (Series 1 Episode 10 - You'll beashoo-in!)
Big City Small World (Series 1 Episode 11 - I'm an architect!)
Big City Small World (Series 1 Episode 12 - Good News & Bad News)
Big City Small World (Series2Episode 1 - Fingers Crossed)
Big City Small World (Series2Episode2- Hello Carlos!)
Big City Small World (Series2Episode3- Harry's New Girlfriend)
Big City Small World (Series2Episode4- Save the Café!)
Big City Small World (Series2Episode5- Good Journalism?)
Big City Small World (Series2Episode6- Welcome back Johnny!)
Big City Small World (Series2Episode7- Alone for Christmas?)
Big City Small World (Series2Episode 8 - Happy New Year)
Big City Small World (Series2Episode9- New Year's Resolutions)
Big City Small World (Series2Episode 10 - A Date)
Big City Small World (Series2Episode 11 - An embarrassment)
Big City Small World (Series2Episode 12 - Something in Common)
Big City Small World (Series3Episode 1 - A Burglary)
Big City Small World (Series3Episode2- A Prize)
Big City Small World (Series3Episode3- The Boys Talk)
Big City Small World (Series3Episode4- A New Chef)
Big City Small World (Series3Episode5- Environmental Issues)
Big City Small World (Series3Episode6- I'm In!)
Big City Small World (Series3Episode7- Dumped?)
Big City Small World (Series3Episode 8 - Speculate To Accumulate)
Big City Small World (Series3Episode9- Saving The Business?)
Big City Small World (Series3Episode 10 - Family Matters)
Big City Small World (Series3Episode 11 - Time Is Money)
Big City Small World (Series3Episode 12 - Popping the Question)
- အသင်းဝင်ရန် link - www.myanmar-network.net/main/authorization/signUp
အလုပ်ခေါ်စာများရှိပါက သိရှိနိုင်ရန် Myanmar Network တွင်အသင်းဝင်ထားပါ။ အသင်းဝင်များအားအလုပ်ခေါ်တိုင်း email မှသတိပေးအကြောင်းကြားပေးပါသည်။
Myanmar Network သည် mobile phone များနှင့်သုံးပါက လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာသုံးနိုင်သည့် website အမျိုးအစား ဖြစ်ပါသည်။
231 members like this
Permalink Reply by moeaye on February 15, 2012 at 15:33
Permalink Reply by HENRY on February 15, 2012 at 18:59
Very thank-you who support this link.
Permalink Reply by Myo Min Oo on November 2, 2012 at 15:24
Permalink Reply by Khin Khin Lwin on February 15, 2012 at 19:15
Thank you for your discussion I like it very much. I would like to get "Big City Small World's audio files (mp3 or so) and lesson", how can I get it? Please guide to me.
Permalink Reply by Мьё Мин У on July 22, 2013 at 18:30
You can go and download as an audio and PDF file via the main site of British Council!
Permalink Reply by Mg Aung Moe Oo on February 25, 2016 at 15:42
Permalink Reply by Ratan Biswas on February 15, 2012 at 19:25
Permalink Reply by Phyo Wai Kyaw on February 16, 2012 at 0:30
Permalink Reply by zaw htike on February 16, 2012 at 9:40
I have been studying this lesson foralong time.But, I didn`t understand exactly some usages.Thank you deeply.Please hurry up! .the translation for this Big city small world lessons.
Permalink Reply by minthuswe on February 16, 2012 at 10:09
ကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာ တစ်ကယ်ကောင်းတယ် လေ့လာရတာပိုထိရောက်တယ်
Permalink Reply by Sanda Pyae Sone on February 16, 2012 at 11:36
Permalink Reply by myokhaing on February 16, 2012 at 12:25